Xukuumadda Somaliland Oo Kooxda SSC Ku Eedeysay Inay Carruur Yar yar u qortaan Askarinimo | Somaliland.Org
May 30, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumada Somaliland ayaa ku eedeyasay kooxda nabad diidka ah ee SSC ee qalaasaha ka wada deegaamada Sool iyo Buuhoodle inay carruurta yar yar u qortaan askarinimo oo ay geliyaan oo ay adeegsadaan falalka amni darro. Taas oo xad gudub ku ah shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah.
Sidaasi waxa lagu sheegay war murtiyeed uu soo saaray Agaasimaha Waaxda Adeega Carruurta ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada Cabdi Cabdillahi Xasan waxaanu ka digay xadgudubta kooxda nabad diidka ahi ay ku hayso carruurta yar yar. Waxaanu qoraalkaasi u dhignaa sidan:-
“Waxaan Jabhadda SSC ugu baaqaynaa inay joojiyaan carruurta yar yar ee ay ka dhigtaan askar ka qayb qaadata dagaalada hubaysan (Child soldiers). Waaxda daryeelka carruurta ee Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshada waxay wel wel ka qabtaa carruuro dadoodu aad u yar tahay oo jabhadda la magac baxday SSC ay u adeegsato inay ka qayb galaan dagaalada malleeshiyadaasi ay kaga soo horjeedo xukuumadda Somaliland. Waxaana nasoo gaadhay oo aan helnay warar lagu kalsoonyahay in Jabhadda SSC ay ku qasbaan in carruurta yar yari ay ka qayb qaadato dagaalada hubaysan ee kala soo horjeedaan xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaana jirta in carruurta hubaysan ee jooga aagaas ay qaarkood dadoodu aad u yar yaryihiin oo ay ka hoosayso 10 sanadood.
Ciidanka maleeshiyada ee hubaysan ee ku sugan meelaha ka baxsan degaanada ay maamusho ukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaa qaarkood ay si xun ula dhaqmaan oo ay jiraan carruuro lafara xumeeyey ama la kufsaday. Dhacdooyinkan foosha xumi waxaa degaanada qaarkood sababtay inay isku dhacyo iyo khilaaf ka dhex abuurto beelaha kasoo jeeda degaanadaas gaar ahaana kuwa ay qaraabada yihiin carruurahaas dhibanayaasha ah ee ay waxyeeladu soo gaadhay. Inkastoo aanay jirin tiro koob rasmiya oo laga sameeyey carruurtaas yar yar oo jabhaddu u Isticmaasho qaab ciidan ee lagu tacadiyey xuquuqdoodii carruurnimo iyo tii aadminimaba waxaan ku qiyaasi karnaa in 30% ciidanka jabhaddu ay ka kooban yihiin carruur da?yar oo aan wali qaan gaadhin. Haddaba carruurahan nugul ee halkii loogu diri lahaa waxbarasho lagu qasbo inay askar noqdaan oo wax laayaan ama iyaga waxyeelo lasoo gaadhsiiyonj. Waxaana muuqata in jabhaddu ay yoolka saarayaan carruuraha tuulo joog ah ee aan ehelkooda la joogin ama kuwa reerahooda kasoo baxsada ee soo gala tuulooyinka ay ka taliyaan maleeshiyadan husbaysani. Waxaase ilaa hadda ururada samafalka ee degaanadaasi ka hawlgalaa ay ka saareen 22 carruur ah oo qaarkoodna waxbarasho loo fidiyey, halka in kale oo badanna lagu celiyey reerahoodii, dhacdooyinka ugu yaabka badanina waxaa ay ka dhaceen degaanada ay maamusho jabhadda SSC. Degaanadaasoo badankoodu ku yaalla meelaha u dhaw xadka Puntland ee ay aanay gaadhin Somaliland sida Tuko raq, Kalabaydh oo ku yaalla xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland , waxaana iyana dhacdooyin kuwaas lamid ah laga soo sheegayaa degaanada Buuhoodle ay ku sugan yihiin maleeshiyada hubaysan ee SSC. Haddaba falalkan la yaabka ah ee ay ku kacday jabhadda SSC waxaa ka horimanaysaa oo kale xuquuqda aasaasiga ah ee carruurta oo ku qeexan xeerarka caalamiga ah, kuwa qaaradda Africa iyo kuwa goboleedka ah waxay kale oo kasoo horjeedaa shuruucda iyo distoorka u yaalla jamhuurya Somaliland.
Waxaana dhacdooyinkani ay si rasmi ah uga hor imanaysaa Axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa isku raacday Unated Nations convention on the rights of the child in 1989.
Qodobka 32aad farqadiisa koowaad ee axdigaasi wuxuu dhigayaa in carruurta laga hortago in loo isticmaalo inay shaqeeyaan si dhaqaale usoo saaraan, taasoo loo dirto shaqo carqaladayn karta waxbarashadooda carruurta ama waxyee layn kara caafimaadka ilmaha ee jidh ahaan, maskax ahaan, damiir ahaan, niyad ahaan iyo horumarka bulshadaba. Waxay kaloo ka hor imanaysaa axdigaas xuquuqda carruurta gaar ahaana qodobka 38aad firqadiisa koowaad oo odhanaysa maamulada jira waa inay ixtiraamaan oo hubiyaan inay ixtiraamaan xeerarka caalamiga ah ee aadminimo ee khuseeya xaalada dagaal iyo ciidamada hubaysan ee la xidhiidha carruuraha.
Isla qodobka 38aad firqadiisa labaad waxay ku waajibanaysaa maamulada jira inay hubiyaan in qofka ay dadoodu ka yartahay 15 jir aanu sinaba uga qayb gelin cadaawadda iyo dagaalada.
Isla faraqa saddexaad ee qodobkaasi wuxuu mamnuucayaa in la hubeeyo oo ciidamada la qoro carruuraha dadoodu ka yar tahay 15 jir, sidoo kalena wuxuu qodobka ka waajibinayaa in dhinacyada is hayaa ay hubiyaan oo ay daryeelaan in la difaaco saamaynta ay dagaaladu ku keeni karaan carruuraha iyo da’a yarta.
Waxaase qodobkaas lagu xoojiyey heshiiskii caalamiga ah ee ee ku saabsan inay mamunuuc ka tahay in qof dadiisu ka yartahay 18 uu ka qayb galo dagaal ama qasab lagu qoro inuu kamid noqdo askari qayb galo dagaal. Haddaba waxaan ka codsanaynaa jabhadda SSC inay arrintaas argagaxa leh si deg deg ah wax uga qabtaan oo carruurtaas aan lagu hubayn qori oo la gayn xero ciidan, laakiin lacaawiyo oo la geeyo dugsi iyo malcaamado ay wax ka bartaan loona dhiibo qalimo iyo buugaag si kor loogu qaado aqoontooda. Waxaan kale oo ka codsanaynaa madax dhaqameedyada, ururada samafalka ee waddaniga ah iyo kuwa caalamiga ahiba ee ka hawl gala degaanadaas kor ku xusan inay u gurmadaan carruurtaas yar yar ee aadka unugul ee lagu tunto xuquuqdooda ay soo gaadho dhibaato shakhsi, mid maskaxeed ama mid niyadeed oo saamayn ku yeelan karta mustaqbalkooda danbe oo ayka kaxeeyaan kana saaraan goobahaas xasilooni darrardu ka jirto si looga bad baadiyo waxyeelada halkaas kasoo gaadhi karta oo keeni kara in ilmuhu naftooda ku waayaan ama dhaawacyo halis ah kasoo gaadhi karo meelahaas ay joogaan ciidamada hubaysan ee xasilooni darrada kawada deganaadaas. Sidoo kalena waxaa habboon in degaanadaas oo ay saamayn ba?ani ku keentay abaarihii iyo biyo la?aantu laga shaqeeyo sidii loo sugi lahaa degaanadaas si ay usoo noqoto degannaanshihii iyo xasiloonidu si ay waalidku u helaan fursad ay usiiyaan adeegga iyo caawimada ay u u baahan yihiin. Ilmo kasta oo Somaliland ku nooli wuxuu leeyahay xuquuq aasaasi ah oo ay kamid tahay inuu waxbarto si kor loogu qaado aqoontiisa, la daryeelo caafimaadkiisa sidoo kalena uu helo daryeelka aasaasiga ah ee u baahan yahay. Ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay in la dhegaysto oo uu talo kasoo jeediyo marka la gaadhaayo go?aan saamayn ku yeelan karta nolosha iyo mustaqbalka ilmaha. Waxa kale oo uu ilmuhu xaq u leeyahay in loo muujiyo naxariis iyo debecsanaan horseedi kara kalgacal iyo kalsooni ka dhexeeya ilmaha iyo waalidkiisa ama kuwa ka masuulka ah. Waxaan rajaynaynaa in shacbiga Somaliland kala shaqayn doonaan xukuumadda Somaliland oo iyadu iska xilsaartay una guntan in la dhawro xuquuqda carruurta, lana daryeelo baahida aasisiga ah ee carruurta, sidoo kalena ay ka difaacdo carruuraha waxyeelada iyodhibaatooyinka kasoo gaadhi kara degaanka ay ku sugan yihiin.”
Previous PostMaayarka Gabilay Oo Jawaab Ka Bixisay Dhaliilo Loo Jeediyay Xukuumada KULMIYE Ka DhalatayNext PostHay’adda Shaqaalaha Oo Dalka Ka Bilaabaysa Tiro-koob Madax-taabasho Ah	Blog